Landa imidlalo yamahhala ku-PlayStation4, ukuthi ungayenza kanjani ngezinyathelo ezilula | Izindaba zamagajethi
Landa imidlalo yamahhala ku-Ps4, ukuthi ungayenza kanjani ngezinyathelo ezilula
Njengamanje ukudlala imidlalo yevidiyo akubizi uma sesivele sinekhonsoli yamanje, njengakulesi simo i-Playstation 4, Sinenqwaba yemidlalo yeFreetoplay okufanele sitshale ngayo lawo mahora angasebenzi lapho sifuna ukuba sekhaya kuphela nge-fan noma i-air conditioner exhunyiwe. Ikhathalogi yemidlalo yamahhala iya ngokuya iba banzi futhi lokho kungenxa yokwamukelwa okukhulu okuye kwaba nomphakathi jikelele, kwaze kwaba seqophelweni lokuba ethandwa kakhulu phakathi kwamageyimu angavamile.
Lesi simo senziwe sathandwa ikakhulukazi ngama-smartphones lapho okuwukuphela kwemidlalo ephumelelayo kungukuthi mahhala ngokuthengwa kwangaphakathi nohlelo. Lokhu kungenxa yokuthi ukudlala kumahhala, kepha kunemikhawulo eminingi. Imikhawulo esukela kunani elilinganiselwe lomhlaba noma amazinga, noma ukumane kuye okuqukethwe okwengeziwe kobuhle njengezikhali zedubula noma izingubo ezihlukile. Le modeli yebhizinisi ibuye yamukelwa ngabaduduzi, bathola okuhlukahlukene kakhulu ku-PlayStation 4. Kule ndatshana sizobonisa ukuthi singayenza kanjani nokuthi yiziphi esizithola zithakazelisa kakhulu.
1 Ngifinyelela kuphi futhi kanjani le midlalo ku-PlayStation 4 yami?
2 Abafana Bokuwa: Ultimate Knockout
3 World Of Warships: Izinganekwane
7 I-Star Trek Online
Ngifinyelela kuphi futhi kanjani le midlalo ku-PlayStation 4 yami?
Kulula njengokungena esitolo bese wehla ngohlu lapho sithola khona isigaba "Samahhala", ngaphakathi sizothola izigaba ezi-3:
Ukuhlola: Lapho singabheka ngokujwayelekile ukuthi isitolo uqobo sincoma ini, Lezi zincomo zivame ukushintsha njalo.
Amaphuzu avelele: Kulesi sigaba sizothola umdlalo ovelele kakhulu okwamanje, noma lowo osethole izindaba eziningi kakhulu.
Mahhala: Ekugcineni lapha siyabona konke okuqukethwe kwamahhala i-PlayStation esinikeza ngakho konke.
Siyakhumbula ukuthi yize le midlalo imahhala, okunye okuqukethwe esifuna ukukuthola kuzokhokhwa. Noma kunjalo, iningi lale midlalo alidingi i-PlayStation plus, noma ngabe sithanda ukujabulela inani elikhulu lemidlalo njalo ngenyangaNgincoma kakhulu ukukhokhela okubhaliselwe njengoba ikhwalithi yalezi zihloko iphakeme kakhulu.
Abafana Bokuwa: Ultimate Knockout
Akuwona umdlalo wamahhala onjalo, ngoba ku Isimo sokuqala sibiza u- $ 19,99, kodwa kulenyanga I-Playstation Plus iyapha, ngokungangabazeki ukuheha okungaphezu kokwanele ukuvuma ukukhokha labo 5 € nyangazonke lokho kubiza ukuhlanganiswa.
Kuyi-Battle royale yemidlalo emincane esikhumbuza ngezinhlelo zethelevishini ezinganekwane ezifana neHumor Amarillo noma iGreat Prix. Kuzwakala kumnandi futhi kunjalo. Isivivinyo ngasinye siba umjaho omkhulu wokudlula izivivinyo ngokushesha okukhulu, lapho Abadlali be-inthanethi abangama-60 bancintisana nxazonke ukuzama ukuqeda kuqala kulowo nalowo kubo. Kuzwakala kuhlanya njengoba kunjalo ngempela, ngoba ngaphezu kombala wokubheja, ubuhle bayo buhlukile kakhulu futhi kumnandi kakhulu ukuwudlala.
World Of Warships: Izinganekwane
Kusukela kubadali beWorld Of Tanks, lo mkhathi wabadlali abaningi osithuthela olwandle oluphakeme lapho sizobamba iqhaza khona empini yemikhumbi eyiqiniso. Izosiyisa ezimpini eziqhakazile nezomlando njengeMpi Yezwe Yesibili. Sizoba nezikebhe ezihamba phambili, kufaka phakathi abathwali bezindiza, ababhubhisi, amafriji noma izimpi.
Njengoba kunemikhumbi engaphezu kwama-200 engakhetha kuyo kuwo wonke amazwe abamba iqhaza kulezi zingxabano ezifana nezempi, ngumdlalo wevidiyo oyingqayizivele, ngoba kukhona imidlalo embalwa yevidiyo ekhombisa ubuqiniso obunjalo nokwethembeka lelo nani lemikhumbi yempi. Kuyajabulisa futhi kujabulise ukujabulisa bonke abathandi balolu hlobo.
Lokhu, njengamanye ama-FTP amaningi, kunezinkokhelo ezithile ezincane zokuthola okunye okungeziweko ukunweba impilo yomdlalo wevidiyo.
Lokhu kungenye engatholakali kunoma yiluphi uhlu lwemidlalo yamahhala futhi lokhu bekungeke kube kuncane, yi-Battle Royale yeCall of Duty. Lo mdlalo wevidiyo uqinisekisa isipiliyoni esikhulu sokulwa phakathi kwabadlali abangafika kwabangu-150. Siyathola Izindlela zegeyimu ezihambisana nokubuyekezwa ngakunye ukuze zikunikeze okuhlukahlukene, singathola imodi yodwa, ama-duos, ama-trios noma ama-quartet. Ngaphandle kokungabaza, into ethakazelisa kakhulu ngalo mdlalo ukuyijabulela nabangani, ngoba ilahlekelwa kuphela yingxenye yomongo.
Imodi ye-Battle royale ukuvela kwezinto ezabonwa nge-Blackout ku-Black Ops 4, ukuthola ezinye izici ezinjenge i-Gulag, indawo lapho esizophelela khona ngemuva kokufa nalapho sizolwa khona nomphikisi esikhaleni esinciphile, ophumelele kule duel uzobuya aphile ekuhambeni. Siphinde sithole imodi ye-BootyKule modi, inhloso kuzoba ukuthola imali eningi ngokusebenzisana nozakwethu, ukuqedela imicimbi ehlukene enjengokubulala iqembu lesitha noma ukuthatha indawo.
Kulokhu kuyisenzo nomdlalo wevidiyo we-MMO womhlaba ovulekile osuselwa kuma-voxels, lapho sithola khona imibuso emikhulu esakhiweni esonakaliseka ngokuphelele nesakhiwo sigcwele izitha, amakhulu ezinto okufanele ziqoqwe, lapho singathola khona okwenziwe ngabanye abasebenzisi, nemigodi eminingi enganqotshwa. Sizoba nezigaba zezinhlamvu eziyi-12 ongakhetha kuzo.
Uma konke enikunikeza mahhala kunganele, sizokwazi ukufinyelela eningi kokungeziwe kwamahhala nokukhokhelwe eSitolo, kepha iningi lazo lizotholakala kuphela ngokudlala.
I-adventure enkulu ye isenzo nendima ukubambisana lapho abadlali abangafika kwabane bezophakanyiswa ukuzingela izidalwa ezinkulu zezinganekwane, ezinye zazo ezaziwa ngokuthi amaBehemoth, abahlali bomhlaba omibalabala ozoletha lo mdlalo wevidiyo empilweni.
Uhlelo lokulwa lusikhumbuza eminye imidlalo yevidiyo efana Imiphefumulo Emnyama noma i-Monster Hunter. Sinethuba lokudala izikhali zethu kanye nemishini yokuzivikela ngenxa ye- uhlelo lokuqamba oluqinile, lapho ukwenza ngokwezifiso kuvela khona.
I-Star Trek Online
I-MMO isuselwa kusaga esisheshayo le-Star Trek, lapho sizothatha khona isikhundla sokuba ngukaputeni womfelandawonye wamaPlanethi Ahlangene, uMbuso WaseKlingon noma amaRomalia. Sizobhekana nemishini ehlukene yokuhlola, ukuvikela kanye nokulwa kwezinkanyezi.
I-Star Trek Online kuzosivumela ukuthi senze ngokwezifiso umkhumbi wethu ngezingcezu ezahlukahlukene zobuchwepheshe. Sizokwazi ukukhulisa isimilo sethu futhi sithole amakhono amasha okuzivikela ngawo ezingozini eziningi ezisilindele endaweni yonke.
Sizoba nokuhlukahluka okuningi kokukhokha okuncane ukuthola imikhumbi edumile, yize iningi lizokwazi ukuyithola emdlalweni uqobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Landa imidlalo yamahhala ku-Ps4, ukuthi ungayenza kanjani ngezinyathelo ezilula
I-AJAX, uhlelo lwakho lokuphepha oluphelele
I-HONOR 9A, inguqulo yezomnotho ebheja kubhethri [BUYEKEZA]